देशभर कसको कति मत ? — News of The World
देशभर कसको कति मत ?
२६ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिले अलग-अलग गठबन्धन बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् । गठबन्धन बनेमा प्रजातान्त्रिकभन्दा वामपन्थी गठबन्धन अगाडि देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको आधारमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले ५१ प्रतिशत पपुलर मत ल्याउने देखिन्छ । त्यस्तै, राप्रपादेखि मधेसी सबै दललाई जुटाउन सकेमा कांग्रेसले ४४ प्रतिशत मत जम्मा गर्न सक्ने देखिन्छ । एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनको त न्यूनतम सहमति पनि हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा प्राप्त मतका आधारमा विश्लेषण गर्दा २ लाख मत कटाउनेमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा गरी ६ दल मात्रै देखिएका छन् । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा दुई लाख मत नकटाएका फोरम, राजपाले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा मत बढाई २ लाख कटाएका हुन । यही मत कायम राखेको अवस्थामा राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना देखिएको हो । त्यसैगरी, फोरम लोकतान्त्रिकले १ लाख २४ हजार र स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवारहरूले १ लाख १९ हजार मत कटाएका छन् । आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट